Jawaabtu ma caqli-galbaa? Rabbi Michael Avraham
Jawaabtu ma caqli-galbaa?
Ramban faaladiisa kitaabka Sharciga Kunoqoshadiisa (bilawga cutubka L) waxa uu sheegayaa in uu jiro mitzvah si loo sameeyo teshuva. Mitzvahkan waxa laga bartay aayadda (ibid.): "Shabbat u leh Rabbiga Ilaahiinna ah." Dhanka kale, Maimonides oo ku jira Sharciyada Toobadkeenka (XNUMX:XNUMX, XNUMX) wuxuu qorayaa in aayaddani tahay ballan xagga Ilaah ka yimid oo ah in dhammaadka Israa'iil uu toobad keeni doono. Habka Maimonides sidoo kale miyuu leeyahay mitzvah uu ku toobad keeno?
הbooska (Mitzvah Shasad) iyo kuwa kale ayaa mar hore tilmaamay khilaaf muuqda meeshan. Dhinac, bKitaabka Awaamiirta (Mitzvah Ag) Maimonides wuxuu qoray:
Waa kii amray in la qirto dembiyadii iyo dembiyadii aan dembaabnay ka hor inta uusan Eebbe kor u qaadin oo uu ku yidhaahdo iyaga oo leh jawaabta.
Halkan kuma jiro amar ah in laga jawaabo. Arrinka qiraalka ayaa halkan lagu xusay sida shuruud ku xiran: haddii qofku uu qirto, waa inuu qirtaa fulinta qiraalka (iyo waxaas oo dhan iyadoo la keenayo allabariga). Falka samaynta teshuva uma eka mid miizaan ah halkan (sida gowraca, ku alla kii doonaya inuu hilib cuno waa inuu si sharci ah u gowracaa. Gowraca waa shuruudo shuruudaysan, laakiin cunista hilibka midkiiba hubaal maaha mitzvah).
Halkaa ayuu nin ku soo gunaanaday Isuduwaha waxbarashada (Mitzvah Shasad), in haddii qofka dembiilaha ah uusan soo laaban, uusan haba yaraatee wax ciqaab ah ku lahayn inuu ka toobad keeno (waxaa lagu ciqaabayaa oo keliya dembigii hore). Waxa uu intaa ku daray in xitaa haddii uu ka toobad keeno oo aanu qiran, ma uu baabi'in mitzvah uu sameeyay Davidoi, maadaama tani aysan ahayn mitzvah wanaagsan (waa 'mitzvah' 'jir' ah, kii sameeya abaalgud buu leeyahay, laakiin kan kii ku xad-gudbo oo aan yeelin waxba ma buriyo).
Dhanka kale, tirada mitzvos ee ka horreeya sharciyada toobadda, Maimonides wuxuu u qoray sidan soo socota:
Hal qaynuun baa la sameeyey, oo waa in dembiiluhu dembigiisa ka soo noqdo Ilaah hortiisa oo uu qirto.
Sidaa darteed sawir u muuqda mid ka duwan ayaa soo baxaya. Qofka dambiga galay waxaa la faray inuu ka soo noqdo xumaantiisa, waxaa kaloo la faray inuu qirto. Halkan jawaabta waxa lagu soo bandhigay sida matzah la sameeyay, waxayna ka kooban tahay laba qaybood: jawaab celin iyo qirasho. Tani waxay ka soo horjeedaa wixii aan ku aragnay ereyada Maimonides bKitaabka Awaamiirta. Sharaxaadda habka Maimonides, jihooyin kala duwan ayaa la sheegay, iyo xaaladda hadda jirta ma aysan faahfaahinin iska hor imaadkan. Waxaan halkaan ku bixin doonaa jiho ka duwan, oo ku saleysan fahamka doorka Kitaabka Awaamiirta Iyo fahamka arrinta jawaabta.
Sida laga arki karo daraasadda afarta xidid ee ka horreeya MaimonidesKitaabka Awaamiirta Isaga, Maimonides waxa uu kooramkiisa geliyaa kaliya mitzvos kuwaas oo leh amar cad oo Tawreed ah. Mitzvot ee laga bartay midrasha (eeg halkasi xididka labaad), ama Sabra, ama Knesset, kuma jiraan kooramkeena. Haddii ay sidaas tahay, waxaa dhici karta in dayn laga leeyahay Daaurita oo aan lagu xusinKitaabka Awaamiirta. Gabagabada ayaa ah in xaqiiqda ah in mitzvah uusan ka muuqan halkaas macnaheedu maaha in aysan ahayn mitzvah.
Ma jiraa amar cad oo Tawreed oo ku saabsan amarka teshuva? Waxaan kor ku soo aragnay, in sida uu Maimonides aayadda ah "iyo sabtida Rabbiga Ilaahaaga ah" waa ballan ee ma aha amar. Weli, bGacan xoog leh Maimonides wuxuu u keenaa waajibka towbad keenka sidii waajib buuxda. Xalku wuxuu yahay in iyada oo lacag la saarayo ay ka soo jeedaan sabra ee maaha bible, markaa kuma soo baxayso.Safamatz. Taas beddelkeeda, bGacan xoog leh Maimonides waxa uu keenaa dhammaan waajibaadkeena xalaasha ah, hadday tahay Tawreed, midrasha, ama Durban ama caado, sidaas darteed waajibka towbad keenka ayaa sidoo kale halkaas ka muuqda.
Waxaan ogaanay in ugu yaraan sida uu qabo Maimonides waajibka ah in la sameeyo jawaabtu ay ku saleysan tahay Sabra. Haddii ay run tahay in uu jiro kanaal uu Eebbe inoo abuuray si aan ugu soo noqonno oo aan dembiyadayada uga cafino, markaa si fudud Sabra waa in aan u isticmaalnaa (eeg Midrashka ka muuqda Brish). Shaarei Teshuvah Ku socota R.I., oo ku saabsan dhulka hoostiisa ee lagu seexanayo xabsiga, kaas oo maxbuus kasta la rabo inuu galo).
Tani sidoo kale waa sababta in Teshuvah, Maimonides kaliya kuma koobna sharciyada, laakiin sidoo kale wuxuu qeexayaa habka Teshuvah, oo wuxuu akhriyaa wanaagga Baal Teshuvah (eeg Ibid. F) taas oo hoosta ka xariiqaysa suurtagalnimada iyo waajibaadka in la sameeyo jawaab. . Kamaan helin qoraalka noocaan ah galalka kale ee halachic ee Maimonides. Waxaa soo baxday in arrimahaas oo dhan ay yihiin kuwo la doonayo in lagu qanciyo in jawaab laga bixiyo, lana sameyn karo. Sababta uu Maimonides ku sheegay buugiisa halakhic isku dayo inuu nagu qanciyo inaan samayno mitzvah, waa in uusan jirin amar ku jira mitzvah (= jawaabta). Aasaaskeedu wuxuu ku yaalaa Sabra, sidaas darteed Maimonides waa inay nagu qanciso inay waajib tahay in sidaas la sameeyo, tanina maaha mid ka mid ah amarrada ugu muhiimsan (oo eeg Lacham PG HG, oo qoray in qofkii aan ka toobad keenin falkaas lagu dacweyn doono, hoogguna uu yahay dembi laftiisa. Ka soo horjeeda ereyadabooska Inta kore ee aan ka jawaabin hubaal maaha dembi. Waxaana laga yaabaa inay jirto kala qaybsanaan u dhaxaysa samaynta iyo inta ka hadhay sanadka).
Dulucda hadalkeena waxaan ku ogaanaynaa in inta badan amar la'aanta ku saabsan waajibaadka xalaasha ah ay sabab u tahay xaqiiqda ah inaysan muhiim ahayn oo ku filan in lagu daro dauriyada xalaal. Laakiin waxaa jira amarro ay amar la'aantu si sax ah u asal ahaan ka soo jeedo, sababtoo ah inta badan muhimadooda iyo dhammaystirnaanta. Mitzvos ee aasaaska u ah shaqada Gd, Tawreed ayaa ka taxaddaraya inay na amraan, si aan taas u yeelno dibadda iteruta deltata.
Raabbigu warqadihiisa waxa uu qoray mabda'a aasaasiga ah oo la mid ah oo ku saabsan shaqada wanaagga. Waxa uu halkaa ku caddaynayaa in waxyaalaha aasaasiga ah ee shaqada Eebbe ay ku jirto fikradda bilowga ah ee ah in qof aan amar bixin oo samaynin uu weyn yahay. Sidaa darteed Tawreed naguma amrin iyaga. Waajibka in laga jawaabo waa tusaalaha ugu muhiimsan ee tan.
Aabbahayo iyo Boqorkayow, waxaannu kula soo noqonnay hortiinna toobad dhammaystiran.
Waxaan u rajeynayaa Beit Yeshiva oo dhan, Rosh Yeshiva Shlita, shaqaalaha heeganka ah, dhammaan ardayda qaaliga ah iyo qoysaskooda guud ahaan Beit Israel, qoraal wanaagsan iyo saxiixa kitaabka Tzaddiks. Sanadkan liibaan iyo nasasho muqadas ah ha ahaado. Sannad caafimaad (gaar ahaan wiilka qaaliga ah ee Israa'iil Yosef ben Ruth ben Tolila iyo dhammaanteen). Sannadka Eebbe oo tawreed ku sugnaado oo aan shaqayno, Camalkeenna oo dhanna wuu liibaanay.
 Oo haa wuu bnolosha aadanaha, IyoShaarei Teshuvah R.I.
 Inkasta oo GRIP uu fasiraaddiisii ​​u leeyahayKitaabka Awaamiirta Of Rasg, wuxuu sharxayaa in habka Rasg uu leeyahay mitzvah ah in la cuno hilibka marka xaaladdeennu wanaagsan tahay, taas oo laga bartay aayadda: Laakiin tani waa hab gaar ah, waxaana hubaal ah in sharciga gowraca uu sidoo kale ka jiro xaalad uu qofku rabo inuu cuno oo keliya, xitaa marka xadkiisu aanu ballaadhnayn oo aanay jirin mitzvah cunista.
 Aragtidiisu waa sahlan tahay: haddii runtii toobad la'aan qirasho la'aan tahay dembi, yacni, baajin, maxaa yeelay, qofka dembaabay oo toobad keenay qirasho la'aan ayaa ka sii daran mid dembaabay oo aan toobad keenin. Tani waa lagama yaabo dabcan.
 Waxaa jira tusaalooyin badan oo mitzvos ah oo ay ku jiraan faahfaahinta qaarkood. Tusaale ahaan, amarka afar nooc, ama amarka tassel (buluug khafiif ah iyo caddaan). Taas ka arag xididka XNUMX ee Maimonides.
 Qaar baa sidaas u sharxay maqnaanshaha mitzvah ee Yishuv Ai ee tireeyaha mitzvos, in kasta oo ay jiraan caddayn qaar ah in Maimonides uu sidoo kale oggolaaday in tani ay tahay mitzvah ka yimid Tawreed.
 Sidoo kale eeg maqaallada "Tabarucaadka iyo Challah: Inta u dhaxaysa amarrada iyo doonista Ilaah", Duhurnimo Kaz (oo halkaas waxaan ku kala soocay laba nooc oo mitzvos ah).
J Daaran Lehavah ma urur cunsuri ah baa? (Tixda 484)
Maanta aragtidani waxay ku jirtaa masraxa dadweynaha Daaran Geeridii Marxuum Prof. David Halvani Weiss (Tiirka 485)